Ukubhuka kokuqashwa kwezimoto ngentengo enhle kakhulu?
Uma unjalo ngifuna imoto eqashisayo, ngokusebenzisa injini yokusesha elandelayo ungathola okudingayo.
Ukuhlelela uhambo kungaba ngumsebenzi olula kakhulu noma, kunalokho, ukuthunywa okungaphezu kokungenakwenzeka. Khetha kahle indawo oya kuyo, indiza, ihhotela ..., izinto eziningi okufanele uzicabangele nokuthi kufanele ukhethe kahle ukuthi ungabumbeki. Kukho konke lokhu kufanele kungezwe okuthile okubaluleke kakhulu: Yini okufanele siyenze uma kufanele sihambe amabanga amade noma sivakashele amadolobha ahlukene phakathi nohambo lwethu?
Inketho enkulu kulawa macala, futhi elula kunazo zonke, ukusebenzisa izithuthi zomphakathi. Kodwa-ke, lokhu kukhetha kungasibangela ukuphazamiseka okuningi kunalokho okuvela ekuqaleni, ngoba singaphansi kochungechunge lwamahlelo amisiwe futhi intengo yokugcina yohambo ingaba phezulu kakhulu ngenxa yalesi simo. Ngokuphambene nalokho, akulula ngaso sonke isikhathi ukuhamba nemoto yakho. Bese-ke senzani?
Impendulo yalo mbuzo ilula kakhulu: izimoto eziqashisayo. Lolu hlobo lwemoto luya ngokufunwa kakhulu ngabasebenzisi abafuna ukuba nohambo oluhle ngaphandle kokushaywa uvalo. Kuyiqiniso ukuthi ukuqasha imoto namuhla akuyona into eheha abantu abaningi, abangakazazi izinzuzo zayo eziningi.
Okulandelayo, sizokusiza, uxazulule ukungabaza kwakho okuningi futhi sikuqondise lapho uqasha imoto. Uma ufuna ukuthola imoto eqashisayo ngentengo engcono, kufanele uchofoze lapha.
Izinzuzo zokusebenzisa izimoto eziqashisayo
Njengoba sishilo ngaphambili, ukusetshenziswa kwezithuthi zomphakathi kuveza izinto eziningi ezimbi uma kuqhathaniswa nezinzuzo ezinkulu esizinikezwa yiqiniso elilula lokuqasha imoto.
Okokuqala kunakho konke libertad. Ukuhamba inqobo nje uma ufuna kuyinto emnandi. Zingabe zingasekho izikhalazo zomfana: lihamba ngasikhathi sini ibhasi? Kufanele uthathe kuphi isitimela esingaphansi komhlaba? Njll, okungaba ukuhlukunyezwa kwangempela.
Okwesibili, induduzo. Akufani nokuhamba ngebhasi noma ngesitimela esigcwele abantu lapho ungagcina khona umthwalo wakho kungaba uhambo lonke, ngoba ezikhathini eziningi asinayo indawo oyifunayo. Kodwa-ke, uma siqasha imoto, zonke lezi zimo ziyasuswa.
Esinye isihluthulelo, ngaphandle kokungabaza, yi ukulondoloza. Ukuqasha imoto kungabiza cishe u- € 5-15 ngosuku, okuthile okungaphansi kakhulu kwezindleko zokuthatha amabhasi amaningana, amatekisi, njll., Ukusuka kwenye indawo uye kwenye.
Kushiwo ezinye izinzuzo zokuqasha imoto kuphela. Impela, lapho unquma ukukwenza, uzobona ukuthi kukhona okuningi okuningi.
Ungakwazi ukuqasha imoto online?
Ezweni elinobumbano oluningi lapho i-inthanethi iphule khona zonke izingqinamba, kufanele kushiwo ngokusobala ukuthi, kusobala, ukuqasha imoto online.
Uma sichitha imizuzwana embalwa yesikhathi sethu esibalulekile siphequlula ngekhompyutha noma nge-Smartphone yethu, sizobona ukuthi inethiwekhi igcwele izinkampani ezinikele kulo mkhakha futhi lapho singasebenzisa khona izinsizakalo zazo ngendlela elula kakhulu futhi ngokuphelele online.
Singathola futhi okwaziwayo izinjini zokucinga, elenza umsebenzi wethu ngendlela emangalisayo. Lezi zinjini zokusesha zikhasa phakathi kokunikezwayo okuhlukile ukusikhombisa lezo ezikhanga kakhulu futhi ezithakazelisa kithi.
Phakathi kwezinkampani ezivelele kakhulu siyaboniswa isabelomali y umbono. Isabelomali siyinhlangano yaseCalifornia esungulwe ngasekupheleni kweminyaka yama-50, okwamanje enezingaphezu kuka- Amahhovisi angama-3000 atholakala emazweni ayi-128 emhlabeni jikelele. Ngokwengxenye yayo, i-Avis ibonakala ngokutholakala kwethu inhlanganisela ebanzi yezimoto zazo zonke izinhlobo nemibandela yokwanelisa noma yimuphi umsebenzisi.
Futhi, ngokuqondene nezinjini zokusesha eziku-inthanethi, asikwazi ukushiya ngaphandle kokusho KAYAK, uhlelo lokusebenza lweselula oluhamba phambili olujabulela ukuzwelana kweningi lomphakathi ngokusebenza kwalo nangokulula. Unganqikazi ukuyisebenzisa.
Ngabe izinjini zokusesha eziqasha izimoto zisebenza kanjani ku-inthanethi?
Un injini yokusesha emotweni eku-inthanethi ingenye yamathuluzi alula kakhulu ukusebenzisa. Futhi, cishe zonke lezi zinhlelo zisebenza ngendlela efanayo.
Njengoba ukwazi ukubona kwinjini yethu yokuqasha imoto, isikhombisa encane enezikhala ezahlukahlukene noma amabhokisi angenalutho esingayigcwalisa ngolwazi esilucelile.
Imvamisa, siyabuzwa indawo lapho sifuna ukulanda khona imoto. Ngemuva, izinsuku zokuqoqa nokulethwa ofanayo. Futhi, ekugcineni, sizoqedela nge izici zemoto uqobo: uhlobo, imodeli, njll.
Vele, kuya ngenjini yokusesha esibhekene nayo, kufanele sinikeze imininingwane eyodwa noma enye, kepha njengomthetho ojwayelekile le yimininingwane evame ukudingeka kithi.
Ingabe kudingeka ikhadi lesikweletu ukuqasha imoto?
Ukuqasha imoto ngaphandle kwekhadi lesikweletu kungaba yinto engenakwenzeka, ngoba izinkampani ezenza lo msebenzi akuvamisile ukuthi zibe nobungani inkokhelo yemali.
Isizathu salokhu silula. Imoto iyabiza, kunzima ukuyinakekela, ngakho-ke ukuqinisekisa ukuthi isesimweni esihle ngemuva kokuyisebenzisa kubalulekile. Ukuze benze lokhu, bakha uhlobo lwe umshuwalense okungezwe entengo yokuqala yokuqashwa kwemoto.
Umshwalense osetshenzisiwe uzokhokhwa kuphela ngumsebenzisi uma kwenzeka lokhu kudale inkinga emotweni. Okwamanje, bahlala begadiwe kulokho okwaziwa ngokuthi diphozithi, okungelutho olunye ngaphandle kokuvimba kokuqala kwenani elithile lemali etholakalayo ekhadini, elizokhishwa lapho kudilivwa imoto isesimweni esifanele.
Lesi yisona sizathu esikhulu esenza ukuthi amakhadi wesikweletu asetshenziswe njalo lapho kuqashwa imoto. Kepha sithi cishe njalo, ngoba lokhu kuyashintsha, futhi namuhla kungenzeka ukuqasha izimoto nge- inkokhelo yemali ezinkampanini ezithile ezifana, ngokwesibonelo, I-AutoEurope.
Ukuqashwa kwezimoto phakathi kwabantu ngabanye
Kulezi zinsuku, sekuvele izinkampani ezintsha ezisebenzisa olunye uhlelo olusebenzayo. Akubona labo ababeka izimoto zabo ezandleni zethu, kodwa kunalokho bakwenza ngokusebenzisa okukhethekile.
Lokho wukuthi, abantu abehlukene baqasha imoto yabo ngokusebenzisa inkampani, ngenhloso eyodwa yokwenza inzuzo. Ngesikhangiso, basungula intengo nokutholakala, futhi labo abanentshisekelo bayabathinta. Umqashi nekhasimende bayahlangana ukulethwa nokuqoqwa kwemoto, okumele ihlale isesimweni esihle futhi inethangi eligcwele likaphethiloli.
Ngale ndlela elula, yini eyaziwa ngokuthi 'ukuqashwa kwezimoto phakathi kwabantu ngabanye'.
Ekugcineni, uma uzodinga ukuqasha imoto isikhathi eside kakhulu, mhlawumbe inketho yokuqasha iMercedes noma olunye uhlobo lweprimiyamu izoba ngcono kuwe ngoba inikela ngamanani entengo kakhulu futhi ngemuva kwesikhashana ungakhetha ukuyivuselela noma ukuyibuyisa ngaphandle kwesibopho.